DEG DEG:Somaliland oo qarka u saaran in ay la wareegto deegaano ay ku sugan tahay Puntland & Ciidamadii ugu badnaa oo saldhigyo ka samaysanaya duleedka Garoowe Xili Gaas…… – Puntlandtimes
DEG DEG:Somaliland oo qarka u saaran in ay la wareegto deegaano ay ku sugan tahay Puntland & Ciidamadii ugu badnaa oo saldhigyo ka samaysanaya duleedka Garoowe Xili Gaas……
September 22, 2018 Puntland PL
GAROOWE(P-TIMES)- Wararka Warsidaha Puntlandtimes.com uu ka helayo magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa sheegaya in ciidamadii ugu badnaa ee Somaliland ay haatan isku diyaariyeen dagaal ka dhan ah ciidamada maamulka Puntland ee ay isku hor fadhiyaan jiidaha hore ee deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool.
Wararku waxa kale oo ay intaasi kusii darayaan in deegaano dhaca duleedka magaalada Garoowe ee caasimada Puntland ay xiligani Somaliland kawado qorshayaan lidi ku ah Puntland, kuwaas oo salka ku haya baahin iyo dhul balaadhsi ay Somaliland ku doonayso in ay kula wareegto deegaano dhowr ah xili qaar kamid ah hogaamiyaasha dhaqanka ee taageersan ay iskugu yeedhay magaalada Hargeysa si ay uga saxiixaan madaxda Somaliland ogolaansho ay Somaliland ku tagto deegaanadaasi.
Deegaanada ugu badan ee bartilmaameedku haatan saaran yahay ayaa waxaa kamid ah degmada Boocame ee gobolka Sool oo ay Somaliland doonayso in ay weeraro baahsan kaga qaado Puntland si ay noo xaqiijiyeen ilo lagu kalsoon yahay, waxaana magaalada Hargeysa xiligani ku sugan Ugaas C/rashiid Xanaf oo uu ku caana shubtay hogaamiyihii hore ee Khaatumo Dr. Cali Khaliif Galaydh.
Mr. Xanaf oo kamid ahaa hor joogayaashii Somaliland u gacan galiyey magaalada Laascaanood dhamaadkii sanadkii 2007 ayaa xiligani wada qorshe uu ku kala dhantaalayo midnimada shacabka Boocame iyo dagaalo abaabulan oo Puntland lagaga qaado deegaanka Boocame si dagaal labo jiho ah ugu furmo Puntland.
Degmada Boocame ee gobolka Sool ayaa waxaa wakhtigani ku sugan ilaa 100 Askari oo ka tirsan maamulka Somaliland, waxaana heshiiska dhex mari doona Biixi iyo Xanaf uu dhigayaa in saldhig weyn laga sameeyo deegaankaasi laga fuliyo hawlgalada ka dhanka ah Puntland, walowse arintaasi aysan raali ka ahayn shacabka deegaanku.
Xiisadaha u dhaxeeya Puntland iyo Somaliland ayaa sii xoogaysanayey tan iyo markii madaxweynaha Puntland uu safar dhanka dhulka ah ku tagay magaalada Badhan ee gobolka Sanaag, waxaana Somaliland ay ku dhawaaqday dagaal ka dhan ah Puntland xili Gaas laftirkiisu wado qorshe dagaal oo ka dhan ah ciidamada Somaliland.
Waxba Gaas naga celin maayo ee nimankaa hanagu dirin.
Aynu runta isku sheegin, GAAS waqti aan ku barano waa inala joogay.